भोलीका लागि आजको काम | himalayakhabar.com
भोलीका लागि आजको काम
यसकारण जरूरी भैसक्यो ड्यालसमा नयाँ मन्दिर
– रामचन्द्र भट्ट | 2nd Apr 2019, Tuesday | २०७५ चैत्र १९, मंगलवार ०९:१३
करिब तीन वर्ष अघिको सन्दर्भ हो । म त्यतिखेर टेक्ससकै छिमेकी राज्य ओक्लाहोमा बस्थेँ । नेपाल छाडेर आएकोले कहिलेकाँही मठ–मन्दिरको खुबै यादले खुबै सताउने । विशेषगरि सप्ताहन्त (विकेण्ड) मा मन्दिर तिर जान मन लाग्थ्यो । एकपटक एउटै अपार्टमेन्ट कम्प्लेक्समा बस्ने साथी नरहरि पाण्डेले भने–‘दाई, अलिकति पर इण्डियनहरुको मन्दिर छ । जाउँ न त ।’
‘हुन्छ’ भनेर भोलीपल्ट बिहानै एउटा गाडीमा हाम्रो परिवार र अर्को गाडीमा उनको परिवार मन्दिर गयौँ । मन्दिर निकै भव्य थियो । निकै खर्च गरेर बनाइएको जस्तो देखिन्थ्यो । मुर्तीहरु पनि निकै राम्रा र आकर्षक थिए । अनेकन हिन्दु देवी–देउताका मुर्तीहरु थिए । मन्दिरमा खाना खाने, पूजारीका लागि अलग्गै भवन थियो ।
मन्दिरमा विशेष पूजा–अर्चना हुने दिन रहेछ । भारतीयहरुको ओइरो लागेको थियो । ‘भैया यसा करो, ए हेल्प करो’ भन्दै केही मानिसले हामीसँग सहयोग मागे । हामीले पनि झण्डै दुईघण्टासम्म मन्दिरको सरसफाई, पूजा सामाग्रीको सफाई, तरकारी काट्ने काममा सहयोग गर्यौँ । शायद उनीहरुले हामीलाई पनि भारतीयनै सम्झिएका थिए । हामीले पनि नेपाली भनेर परिचय दिइरहन आवश्यक ठानेनौँ । उनीहरुले हामीप्रति खासै चासो दिएजस्तो पनि लागेन । झण्डै तीन घण्टा जति हामी त्यहाँ बसेर फर्कियौँ ।
त्यसको अर्को ३/४ महिनापछि हामी ओक्लाहोमाकै बुद्ध स्तुपामा गयौँ । भियतनामीहरुले बनाएका थिए त्यो बुद्ध स्तुपा । निकै भव्य र आकर्षक थियो । हामी पुग्दा ध्यान हुँदैथियो । हामी पनि एउटा कुनामा कुसनमा बसेर ध्यानमा सहभागी भयौँ ।
म र नरहरि दुबैले नेपाली ढाका टोपी लगाएका थियौँ । ढाका टोपीमा देखेपछि त्यो स्तुपाका सबैभन्दा पाको जस्तो देखिने भिक्षु हामी छेउ आए । उनले सोधे–‘यु फ्रम नेपाल ?’
हामीले सहमति सूचकका रुपमा टाउको हल्लायौँ । उनले हामीलाई विशेष रुपमा त्यहाँ उपस्थित धेरैलाई चिनाए । उनी पनि केही समय लुम्बिनीमा बसेर अाएका रहेछन् । भियतनामी भाषामा भनेकाले केही बुझिएन । तर उनले बुद्धको जन्मस्थल भएको देशबाट आएको हो भनेर चिनाएको उनीहरुको संकेतले बुझिन्थ्यो । उनीहरु सबैले हामीसँग हात मिलाए । उनीहरुले त्यहाँ आइरहन पनि आग्रह गरेका थिए ।
मन्दिर त मन्दिरै हो । भगवान पनि एकै हुन् । तर किन हो किन ? मलाई ओक्लाहोमाको भारतीय मन्दिरमा पुग्दा त्यति आत्मियता भएन, जति बौद्ध स्तुपा छिर्दा भयो । बौद्ध स्तुपा पुग्दा आफ्नै लुम्बिनीमा छु जस्तो महसुस भयो । स्वयम्भुमै पुगे जस्तो भयो । काठमाडौं उपत्यकाका डाँडाका काखमा छरिएर रहेका गुम्बाभित्र छिरे जस्तै लाग्यो ।
मनमनै सोचे–मुर्तिले मात्र अपनत्व गराउने होइन रहेछ । मुर्तिले मात्र आस्था जगाउने पनि होइन रहेछ । अपनत्व गराउने र आस्था जगाउने त त्यहाँ भित्रका मानिसका व्यबहारले पो रहेछ ।
म नेपाली समुदायलाइ खोज्दै ड्यालस झरेँ अोक्लाहोमाबाट ।
यो चाँही केही दिन अघिको मात्र सन्दर्भ हो । ड्यालसमा बन्ने योजनामा रहेको ठूलो मन्दिरका विषयमा एकजना सहकर्मी र पाका दाइले प्वाक्क मुख फोरेर भने–‘हाम्लाई जुन मन्दिर भएपनि के मतलव ? पूजाका लागि नेपाली मन्दिरमै जानुपर्छ भन्ने के छ ? नेपाली मन्दिर नभए भारतीयले बनाएका मन्दिर छँदैछन् नि । जहाँ गएपनि देउता एउटै हुन् क्यार ।’
अर्थात उनमा मन्दिरलाई सहयोग नगर्ने बहानाबाजी भेटियो । उनले बुझेर पनि बुझ पचाए । कतिसम्म भन्न भ्याए भने–‘यत्रा पैसावालहरु छन् । उनीहरुले सहयोग गरिहाल्छन् नि । सरकारले पनि सहयोग गर्ला ।’ उनको तर्कले मलाई मनमनै हाँसो उठ्यो ।
यो धारणा तुच्छ लालचले उत्पन्न गराएको बहाना मात्र हो । यस्तो छुद्र बहानाबाट हामी सबै मुक्त हुनैपर्छ । किनकी मन्दिर भनेको कोही एकजना व्यक्तिको प्राइभेट एलएलसी होइन ।
उनको भनाईलाई मैले तत्कालै प्रतिवाद पनि गरेँ । कन्भिन्स गर्ने प्रयास पनि गरेँ । तर मनभित्र यस्ता भ्रम बोकेर बसेका नेपालीहरु डिएफडब्लु एरियामा अझै केही देखिएका छन् । जसलाई चिर्नका लागि यो आलेख जरुरी ठानेको छु मैले ।
म र मेरो परिवार अनुकुल मिल्दा हरेक आइतबार बिहान ड्यालसको अर्भिङमा रहेको नेपाली मन्दिर (पशुपतिनाथ तथा बुद्ध) मा पुग्छौँ । यो क्षेत्रका धेरै नेपालीहरुका आइतबारको दिनचर्यानै मन्दिर र आफ्ना बालबालिकाका निम्ति बित्ने गरेको छ ।
मन्दिर पुग्दा मेरा लागि तीन फाइदा छन् । पहिलो, यो क्षेत्रका धेरै नेपालीहरुसँग एकै ठाउँमा भेटघाट हुन्छ । दोस्रो, भजन आरतीका कारण मनमा शान्ति मिलेको महसुस हुन्छ । तेस्रो कारण पनि छ–मन्दिरमा नियमित रुपमा सञ्चालन हुने नेपाली पाठशालाले पनि अभिभावकलाई व्यस्त गराएको छ ।
अर्भिङको मन्दिर मूर्तिको गोदाममात्र हुँदै होइन । मूर्तिमात्र भएको ठाउँ मन्दिर हुने भए पाटनका हरेक मूर्ति बनाउने पसललाई मन्दिर मान्नुपर्ने हुन्छ । स–साना मूर्ति बेच्ने ठमेलका हरेक पसलहरुलाई पूजा गर्ने भक्तजनको भीड लाग्नेथियो ।
तर होइन । मन्दिर भनेको मूर्ति मात्र होइनन् । मानिसहरुको एकता र भावनासँग यो जोडिएको थलो पनि हो । मन्दिर भनेको रातो अक्षता निधारमा लगाउने थलोमात्र हुँदै होइन । यो त मनभरि हिन्दुत्व र भातृत्व अनि प्रवासमा छँदा पनि एकतामा जोड्ने एउटा धागो पनि हो । यो एउटा हामी सबैको आस्थाको सामुदायिक केन्द्र पनि हो । हाम्रो पूर्बीय धर्मसंस्कृतिको एउटा धरोहर पनि हो । जहाँ हिन्दु धर्मले गर्नुपर्ने भनेर औंल्याएका जीवनका हरेक संस्कारका लागि ठाउँहरु छन् ।
ड्यालसको नेपाली समुदायलाई अमेरिकाका अन्य राज्यबाट हेर्दा निकै भव्य र सभ्यका रुपमा किन पनि लिइन्छ भने यहाँको समुदायले आँट गरेको काम पुरा गरेको इतिहास छ । अमेरिकाको नेपाली समुदायलाई यहीँका व्यक्तित्वहरुले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । ड्यालसबाट अमेरिकाकाका हरेक कुनामा पुग्नुस्, सबैले भन्छन्–‘ड्यालसमा त नेपालीहरु धेरै छन् है ? सबै मिलेर बसेका छन् । ठूलो मन्दिर छ है ? कार्यक्रमहरु पनि धेरै हुन्छन् । नेपाललाई मिस नै गरिदैन रे’ आदी इत्यादी ।
यो किन भएको छ भने यही मन्दिरका कारणले भएको छ । यदी मन्दिर नहुँदो हो त यो ठाउँको शान अहिले जस्तो कदापी हुने थिएन । नेपाली सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक केन्द्र मातहतमा मन्दिर छ । यसले बालबालिकाका लागि भाषा, नैतिक शिक्षा, पूर्बीय दर्शनका बारेमा कक्षाहरु नियमित रुपमा सञ्चालन गरिरहेको छ । जसले गर्दा नेपालमा जन्मिएर यहाँ आएका हुन् या यही जन्मेका बच्चाहरुका लागि निकैनै सहयोग पुगिराखेको छ ।
नेपाली समुदायको बढ्दो उपस्थितीसँगै अहिलेको मन्दिर निकै साँघुरो भएको महसुस त्यहाँ पुग्ने सबैले गरेकै हुन् । गाडी पार्किङको समस्या त्यत्तिकै छ । बुद्ध र पशुपतिको मूर्ति एकै ठाउँमा छ । बालबालिकाको कक्षा हुँदा मन्दिरको माइकिङले अवरोध गरेकै छ । त्यसो हुँदा अब नयाँ मन्दिर बनाउनका लागि यो नै सबैभन्दा उपयुक्त समय हो । जसका लागि मन्दिरको कार्यसमिति, नेपाली समाज टेक्ससले मात्र तातेर झण्डै ४५ लाख डलर संकलन हुन सक्दैन । यसका लागि यहाँ बस्ने तपाइ हामी सबैले दिनको दुइ कप कफीको रकम छुट्याएमा प्रोजेक्ट समयमै सम्पन्न हुनेछ ।
मैले माथिनै उल्लेख गरिसकेँ कि–मन्दिर मात्र हुँदै होइन । मन्दिरमात्र बन्ने हुँदै होइन । मूर्तिमात्र ठड्याउने कोठा बनाउनका लागि यहाँका समाजसेवीहरू रातदिन केही नभनि लागिरहेका हुँदै होइनन् । यो त नेपाल बाहिर रहेको नेपाली समुदायले गर्व गर्न लायक आध्यात्मिक र पुर्वीय दर्शनको केन्द्र बनाउन सबैजना लागेका हुन् । हाम्रा अहिलेका कलिला सन्ततीलाइ सिकाउन, भविष्यमा पैदा हुने सन्ततीलाइ देखाउन र जीवन्त बनाउनका लागि सबैजना लागिरहेका छन् ।
सरकारले दिन्छ त ?
अमेरिकामा नेपाली मन्दिर बनाउन नत अमेरिकी सरकारलेनै सहयोग गर्नसक्छ, नत नेपाल सरकारलेनै । जो जस्ले मन्दिर बनाउन सरकारी सहयोग प्राप्त भैहाल्छ नि भनेर पिठ्यु फर्काउँछन् तिनका आफ्नै सन्ततीले केही वर्षपछि तिनलाइ धिक्कार्नेछन् ।
सरकारले दिने होइन । यो मन्दिर तपाइ हामी सबैले आफ्नो गक्ष्य अनुसार सहयोग गरेर खडा हुने थलो हो । कसैले ठूलो रकम देलान् त कसैले सके अनुसार सानो । अघिल्लो महिना आयोजित कार्यक्रममा देखिएको उत्साहले के प्रमाणित गरेको छ भने घण्टाको १० डलर पाउने गरि परिश्रम गर्नेले पनि संस्थापक सदस्य हुनेगरि मन्दिरलाइ कम्तिमा तीनहजार डलर तिर्ने सहमतिपत्रमा सही धस्काएका छन् ।
यो मन्दिर बनाउने नत अरू समुदायसँग सहयोगको हात थापेर हो, नत अमेरिकी र नेपाल सरकारसँग मागेरै हो । यो हाम्रा लागि, हाम्रा भावी सन्ततीका लागि हो । अरूसँग अाश गरेर काम पनि छैन ।
पैसाको तृष्णा र भोकको मात्रा असिमित हुन्छ । जति भएपनि, जति खाएपनि पैसाको भोक मेटिदैन । जति भएपनि कमै हुन्छ र जति थोरै भएपनि पुग्छ नै । ड्यालस फोर्टवर्थ क्षेत्रमा अहिले व्यबसाय गर्नेहरूसँग कम्तिमा दुइ तीनवटा स्टोर या ग्याँस स्टेशन, सैलुनहरू छन् । काम गर्नेहरूमध्य पनि अधिकांशले प्रतिघण्टा कम्तिमा १३ डलर पाइरहेका छन् । दिनको ५ डलरमात्र मन्दिरका लागि छुट्याउने हो भने आउँदो अढाइ वर्षमा अमेरिकामा रहेका नेपालीहरूका लागि एउटा ठूलो धामका रूपमा ड्यालस चिनिने निश्चित छ ।
के के रहनेछन् मन्दिरमा ?
प्रस्तावित मन्दिरमा पशुपतिनाथ मन्दिर, बुद्ध स्तुपा अलग हुनेछन् । स्तुपासँगै ध्यान केन्द्र पनि हुनेछ । जहाँ शान्तिपुर्ण वातावरणमा ध्यान, योगा शिवीर समेत चलाउन सकिनेगरि डिजाइन भएको जनाइएको छ । अहिले पशुपतिनाथ तथा बुद्धको मुर्ति सँगै छन् ।
यसका अतिरिक्त नयाँ प्रस्तावित मन्दिरमा दुईवटा हवन कोठा, भजनका लागि छुट्टै हल, अन्य देवीदेवताका मूर्तिहरु सहितको मुख्य मन्दिर, ६ वटा कक्षाकोठा, पण्डित तथा व्यबस्थापकको निम्ति दुईवटा आवासगृह, चारसय जनाले एकैपटक खाना खानसक्ने क्षमताको क्याफटेरिया, भलिबल तथा बास्केटबल कोर्ट समेत हुनेछन् । बालबालिकाहरुका लागि खेल्ने ठाउँ पनि नयाँ मन्दिरमा रहनेछन् ।
यो मन्दिरमा एकैपटकमा पाँचवटा बिहे, ब्रतबन्ध जस्ता सामाजीक कार्यहरु समेत गर्न सकिन्छ । अहिले एकै पटकका दुईवटा बिहे वा ब्रतबन्ध गर्न समेत बडो मुस्किल पर्ने गरेको अनुभव मन्दिर व्यबस्थापनको छ ।
हामीले बनाएको, हाम्रो समुदायले खडा गरेको मन्दिरमा हाम्रै अपनत्व हुनेछ । जुन भारतीयले बनाएको मन्दिरमा प्राप्त हुनेछैन । एकछिन पुगेर मूर्तिलाइ प्रणाम गर्न त सकिएला । तर त्यहाँ दिनभरि बसेर बुढेशकालमा गफहरू गर्ने अवसर शायद मिल्नेछैन । जुन हामी अाफैँले बनाएको मन्दिरमा निश्चित रूपमा प्राप्त हुनेछ ।
अर्काको घर राम्रो र नमूनायोग्य बन्यो भने प्रशंसा त गर्न सकिएला । तर त्यहाँ गएर बस्न पनि मिल्दैन र हक पनि हुँदैन ।
तसर्थ, तपाइ हामी सबैले यो मन्दिर अर्थात सामुदायिक भवन बनाउने अभियानमा सहयोग गरैाँ । सबैले होस्टेमा हैँसे गरैाँ । सक्नेले बोर्ड अफ ट्रस्टी बनैाँ । ट्रस्टीमा रहन असमर्थले संस्थापक सदस्य भएर सहयोग गरैाँ । एकै पटक पनि तिर्नु पर्दैन, ५ किस्तामा अढाइ वर्षभित्र तिर्ने गरि भएपनि सहयोग गरैाँ । युलेसमा मन्दिर खडा हुनु भनेको ड्यालसबासी नेपालीको प्रतिष्ठाको सवाल हो । अरू समुदायको ठूलो मन्दिर हुँदैमा हाम्रो शीर ठाडो हुँदैन । शीर ठाडो हुन नेपालीले अाफ्नै बलबुतामा भव्य मन्दिर सहितको सामुदायिक भवन खडा गर्न ढिला भैसक्यो ।
सत्तरी प्रतिशत बलात्कार १८ वर्षमुनिका, प्रायः घटना आफन्तबाटै
२०७५ चैत्र १९, मंगलवार ०८:४९
ललितपुर । नेपालमा अहिले बलात्कारका शिकार भएकामध्ये ७० प्रतिशत बलात्कार १८ वर्षमुनिका किशोरीमाथि हुने गरेको एक तथ्यांकले देखाएको छ। नजिकका छिमेकी, आफन्त वा ...
मृतक भनी दाहसंस्कार गरिएका सुवास जीवितै फर्किएपछि...
२०७५ चैत्र २०, बुधवार ०१:२७